Madaxweynihii dalka Masar ee Maxamed Mursi oo ciidamadda Masar xukunkii ka tuureen. | Somaliland Hargeisa City
Madaxweynihii dalka Masar ee Maxamed Mursi oo ciidamadda Masar xukunkii ka tuureen.
“””Fast moving situation in Egypt”””
Caawa oo ay taariikhdu tahay , 3 juli 2013, ayaa waxaa dalka Masar ka dhacay inqilaab qabow, taasoo xukunkii aya ciidamadu dalka Masar ka tuureen xukunkii madaxweynaha dalka Masar, Maxamed Mursi, oo beryahanba dadku aad ugu kacsanaayeen, tan iyo intii la doortay sannadkii hore , Juun 2013.hase ahaatee maalamahan u danbeeyey ee ay xiisadu aad u sii korodhay.
Shacbiga dalka Masar oo u kala jabay laba (deeply divided country) two camps, qaybood, qayb taageersan iyo qayb ka soo horjeeda Madaxweyne Mursi. Laga soo bilaabo tan iyo daba-yaaqadii sannadkii 2010, dec. ayey ahayd markii shacabka reer Masar ku kaceen xukumaddii uu madaxda ka haa madaxweyne Xusni Mubaarak, oo immika maxkamaddi ku socodto.
Laga soo bilaabo wakhtigaas 2010 ayaa dalka Masar waxa uu galay xaalad adag. mid siyaasiya iyo mid dhaqaale ahba. Waxaana hoosu dhac weyni ku yimid dhaqaalihii dalkaas. Waxaa badatay shaqo la´aantii, amaankii dalka oo faraha ka baxay, waxaana batay dhacii iyo dilkii. Runtii waa xaalad aad u adag. Sida ay khuburo u kuur gala ama daraaseeya dalka Masar, xaaladda Masar maaha mid saacado iyo maalmo lagu xalin karo. Macno ma keenayso haddii la keeno madaxweyne cusub ama xukun dhibtii meeshii uun bay taalaa.
Haddaba waxaa dhaawac weyni soo gaadhay geedi socodkii nidaamka dimuqraadiga ee dalka Masar. Mar haddii uu ciidamadda dalka Masar taladii mar labaad gacanta ku dhigeen. Arrintan (Inqilaabkan) ka dhacday Masar waxa ay saamayn ku yeelan doontaa degenaashaha gobolka. Laba sanno ka hor ayey ahayd markii ay shacabka reer Masar shiid kala hortagayeen ciidamada amaanka ee dalkaasi, maanta se waxaa lagu soo dhawaynayaa go´aankaa ay xukunkii kaga rideen ciidaamada dalkaasi, madaxweyne Maxamed Mursi sacab iyo mushxarad. Sannadkii hore bishii juun 2012 ayey shacabka dalka Masar ay si dimuqraadiya u soo doorteen in ku dhaw 53% shacabka masaaridu.
Haddaba su´aasha is weydiinta lihi waxa weeyi xaaladu siday noqon doontaa maalmaha soo socda ama se xalku muxuu noqon doonaa. Sarkaalka ciidamadda dalka Masar ee inqilaankan ka danbeeyey ayaa si ku meel gaadha xukunka ku wareejiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaas oo khamsiista eri ah loo dhaarin doono madaxwyne ku meel gaadh ah.
Dhacdadan ka dhacaday dalka Masar waa maxay farriinta ay diraysaa?? Waa arrin werwerkeeda iyo khatarteeda leh in ciidamada millitary- ga ay xukunka ka tuuri karaan madaxweyne si dimuqraadiya lagu soo doortay. Waxaa dhawr wiig ka hor dalka Turkiga gilgilay qalalaase xoogan oo laga cabsi qabay in ay ciiddamada soo farogaliyaan kadibna ay xukunka kaga tuuraan raysal wasaaraha dalka Turkiga, Erdogan. Waxaa lagu yaqaanaa dalalka dunnida 3 aad in ay ciidamaddu xukumaddo si dimuqraadiya lagu soo doortay ay xukunka ka tuuraan
« an ka boTv.ga dawladda taakta daran ee federaalka Somalia ka been abuuray muuqaalo video clip ay xaq u leeyihiin mu´aadininn Somaliland
Wargeyska the Guardian Oo Warbixin Ka Qoray Eedo Warshada Chinese-ka Ee Dacar-Budhuq Looga Soo Jeediyey Sun Ay Ku Daadiso Meelo Biyo Mareeno Ah »